IZINHLOBO EZIYI-10 ZOBUSO NGOKUYA NGOHLOBO LWESIKHUMBA SAKHO NOKUKHATHAZEKA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
Izinhlobo Ezi-10 Zobuso Ngokuya Ngohlobo Lwesikhumba Sakho Nokukhathazeka
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa kwesikhumba Ukunakekelwa Kwesikhumba oi-Lekhaka Ngu Somya ojha ngo-Okthoba 17, 2017
Ubuso kuyisiko elibalulekile lanyanga zonke lobuhle elingaguqula ukubukeka nokuzizwa kwesikhumba sakho. Kusukela eminyakeni yobudala, abesifazane bebelokhu benziwa ubuso ukuze bavuselele isikhumba sabo futhi bathuthukise impilo yayo yonke. Kakhulu, ubuso kufanele benziwe njalo ngenyanga, ngoba ukweqisa ngokweqile kungadala umonakalo omkhulu kunokuhle.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi uye endaweni yakho ejwayelekile noma imali ye-splurge kukhithi yobuso, kubalulekile ukuthola uhlobo lobuso okufanele uluthathe. Lokhu kuzoya ngohlobo lwesikhumba sakho kanye nokukhathazeka kwesikhumba ohlushwa yiso. Uma kwenzeka unenkinga enzima yokuthola ukuthi ubuso buni okufanele ubufune, sikusibekele.
Njenganamuhla, kwaBoldsky, singene ezinhlotsheni eziyishumi ezahlukene zobuso umuntu okufanele azikhethele zona, kuya ngohlobo lwesikhumba nokukhathazeka.
Ngakho-ke, funda ukuze ufunde ngama-facials ahlukahlukene nohlobo lwesikhumba abalulungele kakhulu.
1. Izithelo Zobuso Bokuhlanganiswa Kwesikhumba
Njengoba igama liphakamisa, isikhumba esihlanganayo siyinhlanganisela yakho kokubili, isikhumba esinamafutha nesomile. Ngakho-ke, uma nawe unalolu hlobo lwesikhumba, lapho-ke kufanele ucabangele ukuya ebusweni bezithelo.
Ukuba khona kwama-acid ahlukile njenge-malic acid, i-citric acid kanye ne-tartaric acid ebusweni bezithelo kungazuzisa inhlanganisela yesikhumba.
2. Ubuso bePearl Ngesikhumba Esinamafutha
Isikhumba esinamafutha singakhathaza ukusinakekela ngoba sithambekele kakhulu ezinduneni kunanoma yiluphi olunye uhlobo lwesikhumba. Ukuze uthole ukukhululeka ezinkingeni ezinjalo, abantu abanalolu hlobo oluthile lwesikhumba kufanele bakhethe ubuso beparele.
Kulobu buso, ukhilimu we-pearl nemaski kusetshenziselwa ukumunca i-sebum eyeqile ebusweni besikhumba. Ngaphandle kwalokho, lobu buso bungavimbela isikhumba sakho ekubonakaleni okunamafutha kakhulu futhi siyeke ukuqhuma kwezinduna.
3. Ubuso be-Galvanic Ngesikhumba Esomile
Isikhumba esomile sivame ukuba buthakathaka futhi sibukeke singenamanzi. Uma ungumuntu onohlobo lwesikhumba esomile, lapho-ke ungakhetha ubuso be-galvanic.
Lobuso bunganikeza umswakama ne-hydration esikhunjeni sakho. Yize kungenye yobuso obubizayo, kubhekwa njengempumelelo enkulu ekubhekaneni nezinkinga zohlobo lwesikhumba esomile.
kufanele sigcine izithixo emakhaya
4. Isiliva ebusweni besikhumba esibi
Ukuqoqwa kobuthi ebusweni besikhumba sakho kungenza kube kubi. Yingakho kubalulekile ukuyikhipha emzimbeni njalo emva kwesikhashana. Indlela enhle yokwenza lokho kungaba ukuthola ubuso besiliva benziwe njalo ngenyanga.
Lobuso bungakhipha isikhumba sakho emzimbeni futhi buqede ukungcola, ukungcola nobuthi. Ngakho-ke, zama lobu buso ukuthola isikhumba esithambile futhi esithambile.
5. Ubuso be-Collagen Bokukhumba Isikhumba
Isikhumba esikhukhulayo singenye yezikhalazo zesikhumba ezithandwa kakhulu abesifazane abaningi abangenazo. Lokhu kuvame ukwenzeka lapho isikhumba sakho silahlekelwa yi-collagen ne-elastin.
hlobo luni lwesaree ozozigqoka ukuze ubukeke uzacile
Ukuze ulwe nalokhu kukhathazeka kwesikhumba, kufanele uye kobuso be-collagen. Kulobu buso, imikhiqizo yokwandisa i-collagen iyasetshenziswa. Izame ukwenza isikhumba sakho siqine.
6. Igolide Ebusweni Isikhumba Esingafiphele
Ukuvezwa komoya ongcolile, ukwakheka kwamangqamuzana esikhumba afile nokuntuleka kokunakekelwa kwesikhumba okufanele kungenza isikhumba sakho sibonakale sigugile. Uma isikhumba sakho sibonakala singenampilo, lapho-ke kufanele ucabangele ukuthola ukwenziwa kobuso begolide.
Izithako ezikhulisa ukukhanya ezisetshenziswe kulo buso zingakunika ukukhanya okukhanyayo esikhunjeni sakho esingaqondile.
7. Iwayini Lobuso Lesikhumba Esigugile
Uma ukukhathazeka kwakho okuyinhloko kwesikhumba kungukuguga, ubuso bewayini bungaba inketho ekahle kuwe. Kulobu buso, uwoyela we-polyphenol usetshenziselwa ukulwa nezimpawu ezingathandeki zokuguga ezinjengolayini abahle, imibimbi, njll.
Zama lobu busika bukanokusho ukuzama ukusiza isikhumba sakho ukuthi sibukeke sisebancane futhi sibe nempilo.
8. I-De-tan Facial Yesikhumba Esikhumba
Ubuso be-De-tan busebenza kahle kakhulu ukuguqula umonakalo obangelwe yimisebe ye-UV eyingozi.
Phatha isikhumba sakho esishunwe yilanga ngalobu buso obukhanyisa isikhumba nyangazonke ukukhuthaza impilo yaso sonke futhi uqede nokuqothuka kombala okubangelwa ukuvezwa yimisebe yelanga enokhahlo.
9. Ubuso be-Oxygen Ngesikhumba Esibucayi
Isikhumba esibucayi sivame ukucasuka kalula futhi singakhombisa nokubomvu ngemuva kobuso. Kulolu hlobo lwesikhumba, ubuso be-oxygen bungaba ukwelashwa okufanele.
Okhilimu namaski asetshenziswe kulo buso bavame ukuba nomthelela omnene esikhunjeni. Khetha lobu buso ukusiza ukuhlinzeka ngamanzi emzimbeni wakho futhi uwenze ubukeke uhlanzekile futhi ungenaphutha.
10. Ubuso BeDayimane Besikhumba Esilimele
Izici eziningana zangaphakathi nezangaphandle zingadala ukulimala esikhunjeni sakho. Lolu hlobo lwesikhumba luvame ukubukeka lungaphili futhi lugcwele amabala amnyama. Ngokulungisa lolu hlobo lwesikhumba, ungacabanga ukuthola ukwenziwa kobuso bedayimane.
Ngaphandle kokusiza isikhumba sakho ukuthi siphinde sithole umbala waso wemvelo nokukhanya kwaso, lobu buso bangenza namabala ukuthi ahambe.
Qaphela: Uma uphethwe yinkinga yezempilo noma isimo esithile esibi sesikhumba, khona-ke kungcono ukuxhumana nodokotela wesikhumba ngaphambi kokwenza noma yini entsha ebusweni.
ukugqoka ubhodisi kuhle noma kubi
kanjani isisindo ezindaweni ezifanele
izinzuzo zokugqoka umucu omnyama emlenzeni
ungayelapha kanjani i-myopia ngokwemvelo ngokushesha
unganciphisa kanjani isisindo ezinkalweni zakho ngokushesha